VPA အခြေခံမူဝါဒများ | FLEGT
အောက်ပါအခြေခံမူဝါဒများသည် ဆန္ဒအလျေက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPAs) နောက်ကွယ်ရှိ အတွေးအခေါ်များနှင့် အခြားသော ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်များနှင့် မည်ကဲ့သို့ ကွဲပြားခြားနားသည်ကို ရှင်းပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
VPA သည် မိမိစိတ်ဆန္ဒအလျောက် ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဥပဒေအရချည်နှောင်ပါသည်။ EU နှင့် သစ် တင်ပို့သည့်နိုင်ငံတို့သည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါသည်။ လက်မှတ်ရေး ထိုးအတည်ပြုပြီးပါက VPA သည် EU နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ၂ ခုစလုံးကိုချည်နှောင်ပါသည်။
VPA တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းက ထူးခြားသည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဆောင်ပြီး အမျိုးသားအဆင့်သဘော တူညီမှုကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။ VPA သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေး ရေးသေချာစေရန် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ အပြင် ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒေသခံများပါပါဝင်စေရန် EU မှထောက်ခံအကြံပြုပါသည်။
VPA သည် လက်တွေ့ကျပြီး ရလဒ်အပေါ်အခြေခံသည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ VPA သည် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက် သူများမှဖော်ထုတ်သောပြဿနာများအတွက် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ သောနှင့် လက်တွေ့လုပ် နိုင်သောအဖြေများကိုပေးပါသည်။
VPA သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များ နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးမှုများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်သည်။ VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ကိုလျှို့ဝှက်ချက် အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။
VPA သည် ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုထက်ပိုပါသည်။ VPA သည် လူမှုဘဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ရေးကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
VPA သည် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ VPA သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် သစ်တောများအပေါ်မှီခိုနေရသောလူများ၏အခွင့်အရေးများ တိုးမြှင့်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
VPA သည် နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးပါဝင်မှုသည် VPA အား နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်မှုကို သေချာစေပြီး နိုင်ငံအခြေအနေအတွင်း လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိစေပါသည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်ရှိသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏ အဖြစ်မှန်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိပြီး ခံယူချက်များနှင့် အဖြေများကို ကြိုဆိုပါသည်။ VPA အဆုံးသတ်ရန်အတွက် အသေးစိတ်ပုံစံနှင့် တင်းကျပ်သော အချိန်သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သော ဆက်စပ်မှုများနှင့်တွန်းအားများ
VPA မှ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း။
Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer: A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. FERN. 24pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]